Otu esi etinye KDE Plasma Desktop Environment na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye KDE Plasma Desktop Environment na Ubuntu 20.04
October 27, 2021 October 13, 2021 by Jọshụa James
Wụnye KDE Desktọpụ
Usoro ntinye Desktop
Lelee mbụ & Nyochaa Desktọpụ KDE
Aha KDE si na "K Desktop Environment". Maka ndị na-amaghị na Desktọpụ KDE, ọ bụ ebe desktọpụ n'efu, mepere emepe. Ọ na-enye ndị ọrụ Linux na nkesa dị iche iche ihe eserese eserese ọzọ iji hazie gburugburu desktọpụ ha na ngwa maka nkwalite ojiji kwa ụbọchị.
E wezụga nkwalite eserese na mgbanwe, ọ bụkwa ebe dị fechaa, ngwa ngwa, dịkwa larịị nwere arụmọrụ dị elu ma e jiri ya tụnyere kọmpụta ndị nwere ụfọdụ Nkesa Linux. N'okwu Ubuntu, nke a bụ Gnome.
Na njedebe nke nkuzi, ị ga-amụta otu esi etinye KDE Desktop Environment na sistemụ Ubuntu 20.04 gị.
Tupu ịwụnye KDE Plasma, mepụta nkwado ndabere na mpaghara ma ọ bụ nwee atụmatụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ya ma chọọ ịlaghachi na Ubuntu. Iwepụ KDE adịghị mma na ọ ga-eduga na nkwụsi ike nke sistemu yana itinye ngwa enweghị usoro. Ọ bụ usoro na-egbu mgbu n'ozuzu ịlaghachi na steeti mbụ tupu etinye KDE.
N'ozuzu, iwepụ KDE nwere ike ime mana ọ bụghị maka onye ọrụ nkezi. Ọ ka mma ịwụnye otu Ubuntu ọhụrụ wee hichaa sistemu ahụ dị ọcha n'ihi na ọ ga-ewe obere oge, yabụ ịnwe atụmatụ ndabere, ọkachasị mgbe mbụ ị na-anwale KDE, dị ezigbo mkpa ọ gwụla ma ị chọghị ihichapụ gị. usoro dị ọcha, malite na.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04 ma ọ bụ karịa
Ọ bụrụ na ịtọbeghị akaụntụ onye ọrụ sudo ma ọ ga-amasị gị, gaa na nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu.
Enwere ike itinye KDE n'ụdị atọ. Enwere ike itinye atọ ọ bụla, ọ bụ nhọrọ nkeonwe nke dabara maka mkpa gị kacha mma.
Nhọrọ nke mbụ bụ ịwụnye ngwugwu KDE zuru ezu. Nke a na-abịa na ngwugwu niile yana isi KDE Plasma Desktop. Nke a bụ nhọrọ magburu onwe ya maka usoro dị elu nke nwere ike ịwụnye ihe niile dị mma na ihe ndabere ebe ọ bụ na usoro ha nwere ike ijikwa ya. Ihe ngwugwu ahụ dị gburugburu 3.4GB n'ogo.
Iji wụnye KDE Full, jiri iwu njedebe a:
Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye ọkọlọtọ KDE, nke na-abịa na isi KDE Plasma desktọọpụ na ngwa ọkọlọtọ dị ka ihe nchọgharị weebụ na-adịghị mma, onye na-edezi ederede, onye ahịa email, wdg. Ụdị ngwugwu dị gburugburu 1.6GB n'ogo.
Nhọrọ nke atọ bụ ịwụnye KDE Plasma, ngwugwu ndabara pere mpe nwere naanị isi KDE yana ngwa arụnyere obere. N'ozuzu, nha dị n'okpuru 1.2GB.
Ozugbo ịhọrọla alaka nke ị ga-arụnye, usoro ndị a ga-adị ka nke a, ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu ihe dị n'okpuru. Maka nkuzi a, a ga-eji KDE Desktọpụ zuru oke dịka ọmụmaatụ.
Ihuenyo mbụ ị ga-ahụ bụ ngwa ngwa gbasara nhazi SDDM, nke dị mkpụmkpụ maka Njikwa Ngosipụta Desktọpụ dị Mfe, nke bụ Ngosipụta njikwa maka KDE Desktọpụ.
Dị ka e kwuru, ị ga-mkpa ịhọrọ "ssdm". Pịa "TAB igodo" ịhọrọ ma pịa gị "Tinye igodo" aga n'ihu.
Rịba ama, ahụhụ jọgburu onwe ya nwere ike ime mgbe ịlaghachi na ihuenyo nbanye njikwa njikwa SDDM na Ubuntu 20.04. Nke a kacha pụta ìhè na gburugburu mebere dị ka VirtualBox na VMWARE.
Tupu ịmalitegharịa, mepee faịlụ a ka ịhụ ma ọ dị.
Na-esote, gosi ma ọ bụrụ na ị tinyeghị ihe ndị a:
Chekwaa faịlụ (Ctrl+O), wee pụọ (CTRL+X).
Ozugbo ịmaliteghachi usoro Ubuntu gị, ị ga-ebu ụzọ bịa na ihuenyo nbanye ọhụrụ nke dị nnọọ iche na isiokwu nbanye ọhụrụ mara mma sitere na SDDM.
N'ọdịnihu, ị nwere ike gbanwee ngwa ngwa na njikwa ngosi Ubuntu na Gnome ndabara site na ịpị Window igbe nnọkọ.
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ mgbanwe UI ole na ole ma e wezụga ụdị agba na mgbanwe ndabere. Ogwe ọrụ dị ugbu a ka ụdị ọrụ ọrụ windo karịa, yana mgbakwunye ndị ọzọ na akuku aka nri elu nke ọrụ ebe ngosi oge dị.
Iji kwado nrụnye, ị nwere ike ịchọta nke gị "ozi sistemu" iji kwado nkọwa nke usoro KDE na Ubuntu 20.04. Ngwungwu ọzọ dị mma ịwụnye bụ Nchekwa. Iji tinye ngwungwu a, jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị.
Dị ka mmepụta dị n'elu gosiri, ị tinyela KDE Plasma na Ubuntu 20.04 Focal Fossa.
N'ime nkuzi a, ị mụtala nke ọma ka esi etinye KDE Plasma Desktop Environment na Ubuntu 20.04. N'ozuzu, KDE bụ nnukwu ọrụ obodo maka ndị na-achọ nkwụsi ike na ọ dị mma maka ndị chọrọ ihe kachasị na desktọpụ ha, laptọọpụ, na netbook ma na-ahọrọ ihe atụ desktọọpụ omenala.
Categories Ubuntu Tags gburugburu Desktọpụ, Gburugburu Desktọpụ Plasma KDE, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Desktọpụ MATE na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye Elasticsearch na AlmaLinux 8